Dhageyso Faroole: “Xasan Sheekh Waa In Lala shaqeeyo, Haddii uu soo laabto” | Kalshaale
Dhageyso Faroole: “Xasan Sheekh Waa In Lala shaqeeyo, Haddii uu soo laabto”
Jan 11, 2017 - 29 Aragtiyood
Garoowe (Kalshaale) Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa ka duulay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland isagoo kusoo jeeda magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inuu weli yahay musharax u taagan xilka madaxweenaha, wuxuuna sheeg in loo baahan yahay ninkii xilkaasi ku soo baxa in lala shaqeeyo.
“Haddii Xasan Sheekh laga helo waa inuu xilka banneeyaa, sidii aan aniguba sameeyay, haddii uu soo laabtana waa in lala shaqeeyaa” ayuu yiri C/raxmaan Faroole oo hore si weyn u diidaa inuu Xasan Sheekh soo laabto.
HALKAN KA DHEGAYSO HADALKA UU JEEDIYEY FAROOLE
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (29)
qabqable qabiil Faroole waa beentiis wax kasta oo uu sheego. Taariiqda iyo “record” ka ayeey ku jirtaa daanyeernkaan qabiiliistaha ah waxa qabyaalada qayaxan iyo qurunka uu dhaqanka u leeyahay.
Somalida nooc walb oo eey leedahay iyo qabiil walbaba oo eey sheegato, waa in eey ka digtoonaataa daanyeer Faroole oo munaafaq ah wax walba oo uu dhaho.
Hadeer waxuu ku leeyahay ganacsata Mogadidho oo nooc walba leh, qabiilkiisa Majeerteen iyo maamulkiisa Garoowe kataageera abaaraha ku dhacay. Marka, sow wax iska cad, oo
qof daanyeer ah kaliya uusan fahmi karin maaha, in uu ninkaan Faroole u ololeeyo qabiilkisia kaliya, oo uusan kala jecleeyn Somalida kale, in fact, waxuu jeclana lahaa, in Somalida kale ee baaba’do, oo qabiilkisa kaliya noolaada.
Qofkii aan intaas fahmin, waa daanyeer caqli laheeyn, oo eey tahay in uu qaldo, kuna shaqeeysto naccaskaan dadka ka caqliga yar isku dayaya in uu qaldo.
Waa fikirka aad ka qabto FAROOLE. Dad badana waxeey qabaan in FAROOLE yahay halyeey Soomaaliyeed. Waddani Soomaaliyeed. Waligiis gacantiisa dhiig Soomaaliyeed ku bixin.
Marka, kuwa adigo taageersan tahay, ee uu ugu horeeyo XASAN GARGUURTE, iyo CABDIKAREEM GULEED, waxaano u naqaan MOORIYAAN DAMJADIID. Waxeey dhacaan mooyee, aan waxba dhaafin, oo leefa sidee yeeyda.
Marka, noo daa kuwa aanu wadano, annukuna waa idiin deynaynaa daanyeerada aad wadataan.
waa sidaas hadii aad noo deeysaan kuwaan wadano, waan idiin deeyneeynaa kuwaad wadataan. Somalida kale, ayeey ku xirran tahay halka eey miisaanka u badinayan, ma qof lamid ah Madaxweeyne Hassan Shiiq, mise qof lamid ah qabqable/qabiilieeste daanyeer Faroole. Sida uu Madaxweeyne Hassan Shiiq dhahay “qof halyeeygiisa, waa mooryaanka qof kale”. Halkaas oo xikmad ah, xataa makasoo bixi kartaa qabqable dagaal Faroole? Waxaan u maleeyn maya.
Maadaama aad sidaas tirrina, waxeey qirasho u tahay, in eey Somaliya qabiil wali u kala qeeybsantahay. Marka, nacnacda, iyo sheeko raqiiska qabiilka hala gudbo sheekada ah dadka kadaaya. Waa munaafqnimo, aad ku qaldi kartaan kaliya dadka caqli daanyeerka ah leh.
Somaliya waa qabiil. Dowlad kasta oo lasoo dhisayana 100 sanno ee soo socatana waxaa lagu qeeybin qabiil, 4.5 amaba 5.0.
Waxaase muhiim ah, hogaamiyaha isaga oo qabiiliista ah, dadka kale, oo aan ku qabiilka aheeyn ugu yaraan cadaalad u fali karo. Hogaamiyahaasna maahan qabqable Faroole, iyo kuwa lamidka ah.
Iska hilmaan in aad mardanbe xukunka dalka Somaliya boobtana, walaahi beey katahay. Kalawareegaan, xukun badalkaana hadii uu nin aanan xaq u laheeyn in uu hogaamiya dalka Somaliya kusoo baxo, waa tii aad adiga, iyo dad badan oo aad kamidthay, adinka oo qaxooti ah, oo sharaf laheeyn ifka uga tagi laheeydeen.
Saxiiboow, iska daa caayda aad meelna ku gaareen.
Ka warran hadii aan ku dhaho, in aan ahay BARAWANI QUEEN iyo BARAWANI KING, waa in aafka iyo futada kaa waso weeyee, se aad u ogaato waxaan ahay.
Waxaan ka xishoonayaa oo ka baqayaa in aan sidaas ku dhaho, ALLA WEYNI na abuurtay oo noo abuurtay keliya in aanu caabadno, isaga oo aan waxba naga rabin. Cunto naga rabbin.
Bal eeg aayadaas quraanka ah:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ).
Kuleey macnaha aayada garan meeysidee, aan kuu macneeyo.
War adoomahayga beni aadmi iyo kuwa Jinniba waxaan u abuurtay in ay i caabudaan, oo i kilaysiiyaan, oo uusan jidhin ILAAH, ILAAHWEYNI mooyee. Adoomahayga cunto ka dooni maayo, risiq kalina ka dooni maayo, isaga keliya ayaa wax rizaaqa, oo quwad leh iyo awood.
Waxaan ka xishoonayaa dhamaan akhriyaasha soomaaliyeed.
Waa iga tallo, caay melna ku gaari meeysid. Caayna ha isu keenin. Fikirkaaga saleemka ah, KALSHAALI ka dhiibo.
Barwaani queen, Ilaaheeyga aad aaminsantahay was. Munaafaq ayaad tahay. Iguma qaldi kartid, aayad aad afka kasheegto, oo aadan ku camal faleeyn, hooyadiis wase ayaad tahay, mother fucker, daanyeer ah.
Wax walba oo aad aqriwo, walaahin in aanan kaa dhageeysaneeynin. Waad waalantahay, oo dadka la qaldi karro iyo dadka kale ayaa iskaga kaa qaldan. Daanyeer iyo doofaar qabiiliiste ah ayaa iska kaa dhalay.
Walaahi ma miyir qabtid. Inta aad soo miyirsanayso, waxaan ku leenahay:
++ JAZAKULLAAHU KHAYRAN
++ ALLAAH YA SAAMAXAG
++ XASBIYALAAHO WA NICMO WAKIIL.
Jawaabtaadii waa taas. Walaahi in aadan caay iga heleen, ILAAAH DARTIIS.
Barwaani queen, sheeko raqiis, iyo beerlaxawisga diinta islaamka aad ka beensheegeeyso, ula tag dadka caqliga daanyeerka leh. Horaa dad badan, ceeyr looga dhigay, laguna adoonsaday iyada oo diinta Islaamka oo eeysan aqoon u laheeyn loogu soo dhuuntay.
Saaxiboow, miyaadan ahayn reer XAAJI SULAYMAAN.
Waa maxeey diin xumada aad KALSHAALE la soo fadhiisatay.
Saaxiboow, dadka gobta ah magacooda u soo dhig. Ma lihid shaqsiyad aad ku qaadato magaca reer XAAJI SULEEMAAN.
Sidee naag maseertay oo lala guursaday baad u hadlaysaa.
Barwaani queen, you go ahead, and revoke my clan affliation. hehehee,
oo hadeerna kaarka qabiilkeeyga maad iga qaadi adiga oo Majeerteen ah. Waad lunsantahay, waxaana hubaa in aad maskixiyan caadi aheeyn.
Diin xumideeyda waxaa kadaran diin xumadaada, munaafaq aayadaha u bartay in uu dadka caqliga yar ku qaldo ayaad tahay, ee aanan diinta u aqrin/u barin in uu ilaaheey subxaana watacaalaa ugu dahwaada.
Dadka Somaliyeed kuwa qabiil ahaan kuuguu nacambleeyaan meehsana,iyo meelo kale ayaana uga digayaa fitnadaada. Hadii eey arki waayaan xaarka iyo xadiiska aad isku dhex wadana, waa munaafaqiin iyaguna.
SALAAN AAN NIYO AHEYN.
GACMAHA LAYSA SAARAYO.
faroole Ku lahaa xasan halala shaqeeyo
macnuhu waxa weeye xasan boqnaha hala gooyo.
Farxiya xamxamle waa sidaas aad sheegtay.
Daanyeerkaan qabiiliista ah, Faroole waa in uu kajawaabaa su’aasha ah “mala shaqeeyay Madaxweeyne Hassan Shiiq iyo dowlad dhexe ee Somaliya 4tii sanno ee lasoo dhaafay? Jawaabta xaqqa ah, waxaan hubaa in eey tahay, maya!
Sidaas owgeed, qabiiliiste Faroole waa munaafaq beenlow ah, oo eey tahay in eey dadka Somaliyeed ka digtoonaadaan, kuwa qabiilkiisa ah, iyo kuwa aanan aheeynba.
Habaryar soo dhowow. Salaan qaaliya oo kal iyo laab ka soo go’day. Salaan waalidno. Salaan habaryareesan. Salaan wiil la dhalay, oo u hamuuman habaryartiis.
Soo dhowow, geesiyada SHIRSHOORLE, Geesiyada DARWIISHNIMO. Geesiyada KHAATUMO.
Maantay waxaan soo xasuusanayaa, gabaygii ISMAACIIL MIRE.
Tallow kee soo qabtaa. Ma waxan soo qabto, raggow kibirka waa lagu jabaa, mase gabaygii uu u tidhiyey xaaskii uu jeclaa……
Bal aan isku soo dabarido.
Habaryar maantay shaqo la’aan aa i haayso. Xafiiska waa iska fadhiya. Shaqadii iyo dalabiyaadkii baa naga yadhaaday.
Marka, waa in iska jalla-butayaa……
FAROOLE ilaa hadda ma ah qof u dhaxeeya SOOMAALI oo dhan. FAROOLE qabiil DAAROOD la dhaho uu u ahaa Madxweyni.
Halka daanyeerka aad taageersan tahay ee XASAN GARGUURTE uu daasad wato oo uu ku dawarsanaayo magaca SOOMAALIYEED.
GALMUDUG oo qaban qaabinaysaa Doorashadii Madaxweynaha GULMUDUG, markii laga la noqday kalsoonidii MOORIYAAN CABDI-KAREEM GUULEED.
Fowdo waa kow.
HABAR GEDIR, awalbeey saddex u kala fadhiday, tan cadaadana ma soo korortay.
WAR REERKA WAA IN FAROOLE madax looga dhigaa.
Ku lahaa LIIBAANTII PUNTLAND, oo gashay Wadamada CANADA iyo USA.
Please share with me this Article:
Walaahi waa cajeeeeeeeb. Canada iyo USA maxaa baray PUNTLAND, soo tan jaraaiidka ugu waaweyn ee CANADA IYO USA oo leh:
Please ila wadaaga akhriska
Faroole waa Warlord Burcad Badeed Duqoobey warkiisu wuxuu xirmey markii kursi loo dhigey Muuse Suudi Agtiisa.
Xamar tagimahayo oo ma Riyahaad la harsan Quraca, Barafkaada iska dhuuq Xamar waa lama huraane.
Waa Haad kale oo Raqda Somaliya wax ka soo raadsaday.Daaaroodka waxaa la arkaa oo kaliya marka wax la cunayo ee la marayo dariiqa raqda Somaliya loo maro,kaasi oo lagu sheego dawlad iyo doorasho.
Wadankana waaba la haystaa oo alshabaab ayaa haysta.Sidii Somaliya cadowgaa looga sifaynlahaa cidi kama hadasho e meesha wax laga cunayo ayay sida haada ku soo degaan.
Faroole ciidan haka keeno Puntlandta uu sheegyo oo wadanka uu rabo inu madaxwayne ka noqdo ha xoreeyo.
Walaahi waa ayadsanahay fikirkaas in waddanka laga xoreeyo ALSHABAAB.
FAROOLE hadii ciidan xoog leh uu ka soo dundumo, ka warran, HAWIYE waxeey dhahayaan DAAROOD baa nagu soo duulay.
Waagii CABDULLAHI YUUSUF uu ahaa madaxweynaha, waxaa uu PUNTLAND ka soo dundumay ilaa 7,000 oo ciidan ah, oo anigo kuu jiro.
Markii waddankii la soo xoreeyey, dee waad ogsonayd, waxaa XAMAR uga dhacay CABDULLAHI YUUSUF.
Soo teey HAWIYE lahaa, waa wareey DAAROOD lee nagu soo duulay.
Marka, SOOMALI WEYN wee kala aami baxday. Soomaalinimo waa dhimatay.
Marka waxaa ina haaystaa maantay:
3 debbi iyo Libaaxii sheekadii dhex martay, ee mid ba maalin gooni u cunaayey, ilaa la waayo, wax la yiraahdo SOOMAALI.
Marka, ILAAAHEEY waxaan weydiisanaynaa in qalbiga SOOMALIWEYN isu fudho oo burcad isu mariyo.
AMEEEEEEEEEEEEEEEEN YAA RABBI.
Cabdullahi ga aad sheegaysaa wuxuu nin ay Ethopiya isticmaalayso oo nacas ah.Danta laga lahaana waxay ahayd in nidaamkii Maxaakiimta lagu dumiyo oo daka Somaliyeed ee Kibirsan ee qabku ku jiro lagu xasuuqo,lana abuuro dad bilaa qab ah oo ku faraxsan inay shisheeye hoos joogaan sida Cabdullaahigaasi aad sheegayso oo bilaa damiir ahaa.
Markaa sxboow ninkaa iga daa Ilaahay naarta kahu fogeeyo e..
Wali miyaad aragtey Siyaasi Daarood ah oo leh C/llaahi Mahbar ayaa Axmaaro u adeegsatey Dalka Soomaaliyeed waa maya.
Soomaali Heshiin meyso ilaa uu Daarood Cafis weydiisto Ummadda Soomaaliyeed oo ay ku jiraac Caruurta iyo Dumarka Daarood, waa inuu raaligalin ka bixiyo qodobadaan.
1. Dilkii Madaxweyne Sharma’arke
2. kala qeybintii Ummadda Soomaaliyeed aaqirkiina horseeday burburkii Qarankii Soomaaliyeed.
3. Xasuuqii Shacabkii Gobolada Waqooyi oo loo adeegsadey ciidamadii Qaranka
4. Soo raacidii Itoobiya ku qabsatey Xamar iyo Koofurta Soomaaliya
Dambiyada kale waxey kala mid yahiin soomaalida kale sida Dagaaladii Sokeeye, boobitaanka hantida dalka,iyo wixii la mid ah.
CABDULLAHI YUUSUF geesi buu aha. Wuxuu ahaa waddani aan la heli karin. Ma ahayn kuwa qaata biri-qaadashada.
ETHIOPIA waxaa SOOMAALIYA soo geliyey kuwii idaacadaha ka dhehi jiray, SALAADA CIIDULF FIDRIGA waxaano ku tukanaynaa ADDIS-ABABA.
Kuwaase, waxaa weeyee kuwa ilaa maantay ka wada dhibka SOOMAALIYA.
CABDULLAHI YUUSUF waxaa uu isticmaalay cadowga ETHIOPIA waxaa uga xumaa CADOWGA ALSHABAAB oo daahsoon, oo qarsoon.
CABDULLAHI YUSUF aniga gaar ahaan waxaan u hayaa abaal weyn. Waayo, waxaa uu nala xoreeyey DEGMADA BARAAWE oo uu haastay GAALLO MADOW aan naxariisan oo dhiiga dumarka iyo caruurta jaqaayey.
CABDULLAHI YUUSUF yaa miskiin u hiilay. Yaa miskiin ka farxiyey. Yaa cadow jebiyey.
ILAAAHOW JANNADII KAA WARRAABI.
AMEEEEEEEEEEEEEN YAA RABBI
Bilaahi caleeeg, ka warran:
++ SULDAAN WABBAR
++ GEN. DABEECO
Halgankoodii xagee marayaa?? Please let me share with you on their political status. I wish their success and would like to see one day they succeeded, which I hope will take place soon.
Thank you and await your feedback.
faroole uma qalmo madaxweyne qaran iyo wasiir toona qabiilkiisa le ha la shex jooga qabyaalada shalat ninkii xamar iyo qabiilka dago aflagafayn jiray so asaga ma aha se ugu fakaray inu hogaamiye danyeer iga dheh kkkkkkkkkkkkk
Kkkkkkk markey dalkii iyo dadkii soomaaliyeed diirteen ayey qiil ka dhigteen Daarood baa dalkan dumiyey. War xamar iyadoo camiran buu siyaad ka tegey maxad samayseen gadashii kkk sidii danyeerka ayaad u dhaqanteen. Hadeer..ilaa iyo hadaad Lee duhiin UNUKAA LEH.
Xamar ayadoo Bugto oo cancer googooyey ayuu Siyaad Bare ka cararey.
WAA DAD WADA FASHILMAY OO AAN OGOLAYN FASHILKA,WAABA ISLA SAXAN YIHIIN,,